बुर्तिनाले कसरी घटाइन् ६० केजी तौल? – Akhabar Dainik
बुर्तिनाले कसरी घटाइन् ६० केजी तौल?
शनिबार, अशोज १५, २०७३
मोटाएर हिड्नै नसक्ने महिलाहरुको बारेमा विभिन्न समाचार आउने गर्छन् । तर, अस्टे«लियामा एउटी यस्ती महिला पनि छिन्, जसले ६० केजी वजन घटाएर आफूलाई छरितो बनाएकी छिन्। उनले कसरी ६० केजी तौल घटाउन सकिन् भनेर अहिले चर्चा हुन थालेको छ।
नटाली बुर्तिना नाम गरेकी महिलाको वजन कुनै बेला १ सय ३५ केजी थियो । बढी वजन भएकोले हिँडडुल गर्न अप्ठेरो त हुन्थ्यो नै, साथीसंगीसँग रहँदा आत्मविश्वासको पनि कमी हुन्थ्यो । तर, मेहनत गरेर नटालीले ६० केजी वजन घटाएकी छिन् ।
कसरी यत्रो वजन घटाउनुभयो भनी प्रश्न गर्दा उनले भनिन््, ‘हिँडेर र पानी पिएर ।’
गर्भवती भएपछि उनको वजन एकाएक बढेको थियो । त्यसरी बढेको वजन कसै गर्दा पनि घटेन । ‘त्यसपछि मैले संकल्प गरेँ, कसै गरी पनि वजन घटाउँछु भनेर । अनि मैले दिनहुँ कम्तीमा दुई किलोमिटर हिँड्न सुरु गरेँ । साथै, स्वास्थ्यकर खाना खान थालेँ र बढीभन्दा बढी पानी पिउन थालेँ । यही दिनचर्यालाई दिनहुँ अभ्यास गरेपछि आज यसरी छरिती भएँ ।’ खानपिनमा चरम लापरवाही र शारीरिक श्रमको कमीले गर्दा आफू हिजोका दिनमा त्यसरी मोटी भएको समेत उनले बताइन् ।